Igumbi 7 "Zapata" Ukuhamba ngezinyawo - I-Airbnb
Igumbi 7 "Zapata" Ukuhamba ngezinyawo
Arguedas, Navarra, i-Spain
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Teresa
Esangweni eliya ogwadule lwase-Bardenas Reales de Navarra (okumenyezelwe i-natural biosphere reserve yi-UNESCO); 2 kms. kusukela epaki yemvelo i-Senda Viva (enezikhangayo nezilwane ezikhululekile: amabhere, amahlosi, izimpisi, i-Iberian lynx, inyathi, umbukiso we-raptor)
Sizokutshela ukuthi akufanele uphuthelwe ukuvakashela (amadolobha asendulo, izinqaba, ama-cellars ewayini, izindlu zezindela) nokuthi ungadla kuphi kahle.
Uzothola amathiphu ethu amahle kakhulu wokuhamba ngebhayisikili noma ukuhamba ngezinyawo, izithombe
Sisemnyango wogwadule nepaki yemvelo i-Bardenas Reales kanye nepaki yokuzijabulisa i-Senda Viva.
Esifundeni sethu futhi endaweni engaba ngu-50 kms. Ungathola amadolobha nezinqaba zasendulo (Olite, Ujué, Artajona), Izindela zaseCistercian (La Oliva, Tulebras), inqwaba yamaseli ewayini (singamakhilomitha ayi-15 ukusuka eLa Rioja), enye yezithelo ezinhle kakhulu ezweni eline-gastronomy. kobuhle (Huerta de la Mejana de Tudela), imiphakathi ukuthi ukuxuba Christian, Muslim namasiko Jewish (Tarazona, Tudela), imikhosi kanye namasiko lidumile egijima ngayinye kulezi zinkunzi eziyishumi (Pamplona, Arguedas).
Sinezinsiza zasekuseni ezenziwe ekhaya kakhulu, ezinemikhiqizo yemvelo evela engadini yethu. Intengo yayo 7 euros umuntu ngamunye. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-5 mahhala
Indawo enokuthula, esedolobheni elidala, kodwa enemigwaqo ebanzi edolobheni elinabantu abangu-2 000, engaphansi kwentaba.
Ngaphambi kwendlu, kunesikwele esincane esisetshenziswa njengendawo yokungcebeleka nemicimbi yezingane, kukhona isikhungo sezempilo, indawo yabahola impesheni kanye neBandla lekhulunyaka le-15 elisetshenziselwa imibukiso nemicimbi yamasiko.
Kunezindawo zokupaka ezimbalwa endaweni yonke, ezingakhokhelwa umphakathi.
Ngemuva kwendlu yethu kunendawo yokuhamba ngezinyawo, ebizwa ngokuthi iBordón, indawo enhle kakhulu yedolobha, futhi eholela emigedeni, ekhuleka esinqeni sentaba.
Ziwuhlobo lwe-troglodyte futhi ziye zahlalwa, kuze kube maphakathi nekhulu leminyaka elidlule, ngabazali bethu nogogo nomkhulu. Bangavakashelwa.
Ngaphakathi endaweni engaba amamitha angu-300 kukhona zonke izinhlobo ezitolo kanye nezinsizakalo: amabhikawozi, nemishayo, zokudla, ekhemisi, sezempilo, Fishmonger, greengrocer, esitolo sezincwadi, amabhange, eposini, igilosa, ... kuba kakhulu izivakashi edolobheni, ngenxa emapaki ayo emvelo ama-2.
Sinedokodo elikhulu lapho sizokutshela khona ukuthi uvakashele ini, ungadla kuphi kahle, uvakashele izikhathi ezindlini zezindela, wazi amadolobha asendulo esifunda sethu, izindawo zokugcina iwayini, .....
Sizokhombisa zonke izindawo ezinhle ongazivakashela:
- Ugwadule lwaseBardenas
-Park of Senda viva
-Amadolobhana nezinqaba zenkathi ephakathi
-Laphi ukudla kahle
Sinikeza ulwazi mayelana nemizila yokuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukugibela izintaba noma ukugibela amahhashi.
Sinedokodo elikhulu lapho sizokutshela khona ukuthi uvakashele ini, ungadla kuphi kahle, uvakashele izikhathi ezindlini zezindela, wazi amadolobha asendulo esifunda sethu, izindawo…
Hlola ezinye izinketho ezise- Arguedas namaphethelo